mairie-antananarivo – Fanambaran’ny Sekretera Jeneralin’ny CUA
Fanambaran’ny Sekretera Jeneralin’ny CUA: Razafimahefa Heriniaina androany Alakamaisy 12 aprily 2018 tato amin’ny lapan’ny tanàna Analakely.
- Tsy misy ny fakàna vola ataon’ny Kaomininan’Antananarivo Renivohitra ankoatry ny haban-tsena mahazatra ; izay misy tickets omena ny mpivarotra.
- Tsy maintsy manana taratasy manokana na “ Ordre de mission” sy mitondra “Badge” avy amin’ny Direction iasany ny mpiasa tsirairay avy eo ampanatanterahina ny iraka ampanaovina azy. Raiso an-tsoratra ny anarany sy ny numéro ny badge fa zonao izany.
- Tokana ihany ny fandoavam-bola dia ety amin’ny « Guichet Unique »n’i Kaominina an-drenivohitr’Antananarivo.
- Angatahina sy entanina ireo rehetra ianjadian’ireo asa fampitahorana amin’ny fakàna vola tsy ara-dalàna eny an-tsena ireo mba tsy hisalasala;ka hanantona avy hatrany ny tompon’andraikitra aty Analakely; varavarana 36.
- Aoka hanana fahasahiana isika mpivarotra ahafahantsika miaraka manarina ity Renivohitr’i Madagasikara ity.